Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo Ankara kula kulmay madax Turki ah (Sawirro) – Xeernews24
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo Ankara kula kulmay madax Turki ah (Sawirro)
10. April 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir, ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng.Yarisow) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Ankara ee Caasimadda Dalka Turkiga, ayaa kulamo la qaatay Xoghayaha guud ee dawladaha Hoose ee Turkiga iyo masuuliyiin kale.
Mudane Yarisow oo weheliyo Guddoomiye ku xigeenka Marwo Basma Caamir Ahmed, safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga Danjire Jaamac Abdullahi Ceydiid iyo mas’uuliyiin kale ayaa kulan gaar ah la yeeshay Xoghayaha guud ee Dawladaha Hoose Turkiga, Mudane Hayrettin Gungor, waxaana ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya labada dhinac iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen horumarinta magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, Guddoomiye Yarisow ayaa la kulmay madax ka tirsan Hay’adda bisha Cas ee Turkiga iyo waaxda dhismaha jidadka u qaabilsan magaalada Ankara oo dhammaantood ay isla soo qaadeen horumarinta Muqdisho.
Guddoomiyaha oo wafdigiisa ay ka mid yihiin xubno ka tirsan Maamulka, Ganacsato iyo howl-wadeennada Gobolka Benaadir, ayaa inta uu joogo Turkiga waxa uu xoogga saari doonaa, sidii ganacsatada dalkaas ay u maalgashan lahaayeen Gobolka Benaadir, xoojinta xidhiidhka Muqdisho ay la leedahay magaalooyinka dalkaas, dar dar gelinta arrimaha iskaashiga,tababarrada, tayeynta shaqaalaha Gobolka Benaadir iyo is dhaafsiga khibradaha maamul ee labada dhinac.
Duqa Muqdish oo booqasho ku jooga Turkiga
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/booqasho-turkey-7.jpg 359 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-10 11:57:072018-04-10 11:57:07Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo Ankara kula kulmay madax Turki ah (Sawirro)
5 arrin oo laga baran karo is-casilaaddii guddoomiye Jawaari. Imaaraatka oo Tawaawac ka dhamaadday ka dib lacagtii looga qabtay Muqdisho.